OED COVID-19 | Diidmada Faa’idooyinka
Xaaladaha qaar waxay joojin kartaa oo ay diidi kartaa faa’idooyinkaaga. Xaaladahaan waxay u baahantahay Waaxda Shaqada inay baaraan sheegashooyinka, go’aansadaan u qalmida ama go’aamada maamulka ansixiyeen. Waxaa ku jira, laakin kama xadidno:
In lagaa fiijiyo shaqada ama lagaa joojiyo shaqada
Aanan kuu suurtogelin shaqeynta
Ka fogaanshaha deegaankaaga joogtada ah
Ka qeybgaleysid dugsiga ama tababar
Iskaaga u shaqeysatid
Cabsi ku jirtid
Shaqo walboo maqan
Iska diidida shaqo siin
Ku guuldareysatay inaad si firfircoon shaqo u raadisid
Heleysid lacag bixinta howlgabka (marka laga reebo amniga bulshada)
Ku guuldareysatid ka qeybqaadashada wareysiga Qiimeynta Dib u shaqaaleysiinta iyo U qamlmida
Iska diidida gudbinta shaqo ee WorkSource Oregon
Ku guuldareysatid dhameystirka howlaha diiwaangelinta inta lagu jiro xarunta deegaankaaga WorkSource Oregon
Ahaanshaha shaqo la’aan sida ay sababtay qilaafka shaqada, ama
Xareynta faa’idooyinka isbuuclaha inta lagu jiro kuleelaha, qaboobaha, ama muddooyinka nasiinyada guga ama u dhaxeeyo muddooyinka markii aad tihid shaqaalaha waxbarashada tacliinta ama aan waxbarashada aheyn
Arimahaan waxay ku sababeysaa joogsi sheegashadaada illaa go’aan aan ku bixino ama aan ku diidno faa’idooyinka la gaaro. Ku sii soco inaad sheegatid faa’idooyinka isbuuclaha inta lagu jiro baaritaanka arin walba ee sheegashadaada. Tani waxay hubisaa inay kuu suurtogaleyso inaad heshid lacag bixinta isbuucyadaas haddii baaritaanka sababo go’aanka lagu bixinayo faa’idooyinka.
Garsoore ayaa dhameystirayo baaritaan. Haddii garsooraha u baahanyahay warbixin dheeraad ah, way kula soo xiriirayaan. Hubi inaad ka jawaabtid codsiyada oo ay la jiraan warbixin dhameystiran. Haddii aad ku guuldareysatid inaad ka jawaabtid waxay sababeysaa in go’aan laga gaaro warbixinta la heli karo oo waxay sababi kartaa diidmada faa’idooyinka. Warbixin ka haynta ama ku wargelinta warbixin been ah ee Waaxda Shaqada waxay leedahay cawaaqiibo xun.